China 4㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER fekitori uye vagadziri | JCT
Muenzaniso: E-F4 SOLAR
4m2 solar mobile yakatungamira tirera （Muenzaniso: E-F4 SOLAR, chekutanga inosanganisa zuva, LED yekunze yakazara yakazara skrini uye nhare yekushambadzira matrailer pamwechete kuita organic organic.
4m2 Solar nhare inotungamirwa tirera（Muenzaniso:: E-F4 SOLAR） Kutanga inosanganisa zuva, LED yekunze yakazara Ruvara skrini uye nhare yekushambadzira matrailer pamwechete kuita organic organic. Iyo inoshandisa zvakananga simba rezuva semagetsi asinganetsi, asina njodzi, akavimbika, anoshanda, anobatsira zvakatipoteredza uye zvinoenderana neyakajeka simba rekuchengetedza magetsi, kutyora miganho yeakare magetsi magetsi inoda kutsvaga yekunze magetsi magetsi jenareta.
360 degree yakatenderera yakatungamira skrini
JCT kambani yakazvimiririra inogadzira inokomberedza mbiru mbiru yekubatanidza inotsigira system uye hydraulic kusimudza uye kutenderera system pamwechete iyo inoziva 360 degree kutenderera isina akafa kona, ichiwedzera kusimudzira kutaurirana mhedzisiro, uye inonyanya kukodzera guta, gungano, yakazara chiitiko maficha senge kunze kwemitambo munda .
Mufashoni kutaridzika, simba rehunyanzvi
Panzvimbo pechinyoreso chemhando yezvigadzirwa zvakapfuura, matrailer matsva anotora dhizaini isina mitsara yakachena uye yakatsetseka mitsara uye yakapinza micheto, inoratidza zvizere pfungwa yesainzi, tekinoroji uye zvemazuva ano. Inonyanya kukoshesa traffic conductor, pop show, fashoni show, yemagetsi mota chigadzirwa chitsva kuburitswa, nezvimwe.
Kupinza hydraulic vachisimudza system, yakachengeteka uye yakasimba
4m2Solar mobile inotungamirwa tirera inotora iyo yekunze hydraulic inokwidza system ine 1m yekufamba kukwirira uye yakachengeteka uye yakasimba. Kureba kweiyo LED skrini kunogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nharaunda kuona kuti vateereri vanogona kuwana yakanakisa yekuona kona.
Yakasarudzika traction bar dhizaini
4m2Solar mobile inotungamirwa tirera yakaiswa inertial chishandiso uye ruoko bhureki, uye inogona kudhonzwa kufamba nemota kuita nhepfenyuro uye kuzivisa. Iyo michina dhizaini yemanyorero anotsigira makumbo ari nyore uye anokurumidza kushanda.
Solar uye bhatiri magetsi magetsi
4pcs 180W solar panels. Semuenzaniso, iyo inoshanda nguva yekuchaja kwezuva inoverengerwa semaawa mashanu pazuva. 180 * 4 * 5 = 3600W, simba iri rinogona kugara kwezuva rimwe. Iyo inoenderera mukati memazuva ane zuva ne12pcs 2V 400AH mabhatiri.
4m2Solar mobile inotungamirwa matrailer ane yakazvimirira uye isina kumisikidzwa magetsi magetsi modhi uye kuita kwakanyanya. Iyo yakachengeteka, yakavimbika, yakagadzikana, isina ruzha, inochengetedza zvakatipoteredza uye haina kuganhurirwa nenzvimbo dzenzvimbo.
1.Size: 2700 × 1800 × 2300mm, Inertial mudziyo: 400mm, Tow bhaa: 1000mm
2. Kunze izere neruvara simba kuchengetedza LED skrini (P10) saizi: 2560 * 1280mm
3. Hydraulic yekusimudza system: Italy inotumira hydraulic cylinders, kukwirira kwekufamba 1000m.
4) Simba rekushandisa (avhareji yekushandisa): 50W / m2 (kuyerwa).
5. Multimedia vhidhiyo sisitimu: Tsigira 4G, U dhisiki, akakosha mavhidhiyo mafomati.
Muenzaniso E-F4 Solar（4m2 Solar MOBILE LED TRAILER ）
Brand JCT Saizi yekunze 2700mm (L) x1800mm (W) x2300mm (H)
Akaputsa Ruoko / Hydraulic Tire Matayi akasimba erabha
Kutsigira makumbo 4pcs
Akatungamirira simba okuponesa chidzitiro
Saizi yekukura 2560mm (W) * 1280mm (H) Dot Pitch 10 mm
Saizi Module 320mm (W) * 160mm (H) Kupenya ≥5500cd / m²
Max SimbaKushandiswa 150W / m2 Hupenyu 100,000 maawa
Hydraulic vachisimudza System
Hydraulic Nokusimudza System Nokusimudza renji 1000m
Hydraulic Inotenderera Sisitimu Screen inogona kutenderera madhigirii makumi matatu
Mapapiro-anopesana neNzvimbo Kurwisa Chikamu che8 mhepo mushure mechidzitiro simudza 1000mm
Saizi 1480mm x 670mm * 4pcs Simba 180W * 4 = 720W
Inzwa Zvinotaurwa voltage 9-36V Output voltage 24V
Rated kuchaja simba 720W / 24V
Simba rinokwana re photovoltaic array 1170W / 24V
Player Nova TB4-4G Kugamuchira kadhi Nova MRV316
Pashure: 2㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER
Zvadaro: VMS traffic tirera- izere ruvara
Solar Mobile akatungamirira Trailers
Taxi yekumashure hwindo rinoratidza chitaurwa
Mobile Yakatungamira Screen Rori, Akatungamira Nhare Yekutengesa, Akatungamirira Mobile Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori, Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori,